Cake mofomamy misy whisky - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo90 minitraOlona 8295 kaloria
Tsarovy amin'ity mofomamy ity amin'ny tsiro sôkôla matsiro. Miaraka amin'ny Thermomix anay dia hanao mofomamy kafe mahafinaritra sy be ranony izahay, izay hositraninay amin'ny syrup whisky manan-karena.
Hofenoinay sôkôla sy kafe mifangaro mahafinaritra ny sosona mofomamy anao. Tsy hadinontsika ihany koa ny fandrakofana azy, miaraka amin'ny crème whipped whipped sy ny tsiro kafe marefo.
Ity mofomamy ity dia tsara ho an'ny fankalazana sy ho an'ireo tia tsiro manana toetra. Raha te hahafantatra ny fomba hanaovana azy tsikelikely ianao dia manana horonantsary fampisehoana koa. Manantena aho fa tianao ity tsindrin-tsakafo mahafinaritra ity.
1 Cake mofomamy misy whisky
Ho tianao ity mofomamy ity noho ny tsirony kafe sy ny miaraka aminy whisky. Ho hitanao ny fomba fanaovana mofomamy be ranony izay hofenoina sôkôla ary azonao atao ny manarona crème matsiro miaraka amina kafe iray.
Fotoana manontolo: 1h 30M
120 g ny lafarinina varimbazaha
Fakana vanila 2 sotro fihinanana
70 ml rano
Whisky 70 ml
Rano 15 g
90 g ny firakotra sôkôla mainty
500 g ny crème whipping cold (200 g dia ho an'ny famenoana ary 300 g ny fametahana sy ny haingo)
Koba azo levona 1 sotro fihinanana
Sôkôla grated 5 g
Manomana ny mofomamy izahay. Ao amin'ny verantsika Thermomix dia apetrantsika ny lolo ary ampio ny atody 4 sy ny siramamy 100 g. Izahay dia manao fandaharana 6 minitra amin'ny 37 ° amin'ny hafainganana 4.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 ° izahay. Rehefa afangaro, dia handrafitra fandaharana hafa izahay 6 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 4 tsy misy mari-pana. 30 segondra alohan'ny hifaranan'ny fifangaroana, ampio ny sotro fihinana vanila roa sotro fihinana sy ny kafe mety levona roa sotro fihinana. Rehefa mijanona ny fangaro dia ampio ny lafarinina varimbazaha 120 g sy ny vovo-tsakafo vovoka fanaovana mofo. Izahay dia manao fandaharana 4 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Manomana lasitra azo esorina amin'ny lasitra izahay. Raha ny amiko dia nampiasa bobongolo vita amin'ny silika 18cm aho, izay nametrahako taratasy amam-bolo vita amin'ny rongony ao am-potony mba hamahana azy tsara kokoa. Izahay dia manampy ny fangaro mofomamy ary mametraka azy ao anaty lafaoro misy hafanana ambony sy ambany. Hanendy izany mandritra ny 20 minitra isika.
Ao anaty rano mangatsiaka vera lehibe dia apetraka ao anaty hydrat ilay ravina gelatin tsy miandany. Izahay dia manamboatra ny syrup amin'ny fampifangaroana ny rano 70 ml, ny whisky 70 ml ary ny siramamy roa sotro. Afangaroinay tsara izy mba ho levona ny siramamy. Nanokana izahay.
Nokapohinay ny crème. Ao amin'ny verantsika madio sy miaraka amin'ny lolo, dia ampianay ny crème mangatsiaka 500 ml horesena sy ny siramamy 125 g. Izahay dia mamolavola azy io 45 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5. Asandratray ny sarony ary ampio ny sotro ny kafe mety levona ary manohy mikapoka. Raha ny amiko dia mila olon-kafa aho 45 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5, saingy ity angon-drakitra ity dia manondro satria mety handany fotoana bebe kokoa na kely kokoa. Tsy maintsy jerena fa ny crème dia tsy ampiasaina be loatra. Esorinay amin'ny vera ilay crème dia manadio azy izahay.
Ho an'ny famenoana, ampio ny rano 15 ml, ny whisky 15 ml, ny sôkôla mitobaka 90 g, ny siramamy 20 g, ny kafe 2 tsy azo sotroina, ny sotro fihinana 3 ary ny ravina gélatine voarindra nefa nararaka tao anaty vera. Mandrindra izany XNUMX minitra izany 90 ° amin'ny hafainganana 1,5. Rehefa vita dia tsy maintsy avelantsika hangatsiaka izy mba hahafahantsika afangaro amin'ny crème whipped.
Manasaha crème whipped 200 g ary afangaro amin'ny famenoana. Hanao azy io am-pitandremana sy amin'ny hetsika mandrakotra isika mba tsy hianjera ny volantsika.
Mamelatra ny mofomamy isika ary mizara azy telo. Hosorana amin'ny syrup ny sosona voalohany ary hosaronantsika amin'ny antsasaky ny famenoana. Apetrakay ny sosona sponjy mofomamy faharoa ary mandena azy amin'ny syrup. Izahay dia manampy ny antsasaky ny famenoana ary manarona ny sosona fahatelo amin'ilay mofomamy spaonjy. Hosorana amin'ny syrup koa isika.
Apetrakay ao anaty kitapo mofomamy miaraka amina noza malalaka sy olioly ny sisa amin'ny crème whipped. Izahay dia manarona ny mofomamy amin'ny crème ary miaraka amin'ny fanampian'ny spatula kely izay manarona sy manalefaka. Hanao izany amin'ny sisin'ny mofomamy ihany koa isika.
Amin'izay sisa tavela amin'ny crème dia haingoinay ny tampony amin'ny fantsona vitsivitsy. Maka sôkôla iray izahay, totoina ary haingo ny mofomamy. Napetrakay tao anaty vata fampangatsiahana izy mba hilamina tsara ary hatolotro azy mangatsiaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Cake mofomamy misy whisky
Tongolo gasy nopotsehina ovy